6 Faa'iidooyinka Suurtogalka ah ee Nootropic Sunifiram (DM235) budada
(1,5-dimethylhexyl) amooniyam ≥98%
Monocotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) maskaxda doofaarka ≥98%
Nikotinamide Mononucleotide (NMN) ≥98%
Isdhaafka 7P ≥98%
1. Waa maxay Nootropics iyo Sunifiram?
2. Sidee ayuu Sunifiram u shaqeeyaa?
3. Shan faa'iido oo ka mid ah faa'iidooyinka Sunifiram
4. Sida loo isticmaalo Sunifiram
6. Maxay yihiin saameynta ay leedahay Sunifiram
7. Yaa isticmaali kara Sunifiram
Waa maxay Nootropics iyo Sunifiram?
Miyaad ka fekertay inaad isdifaacdo suurtogalnimada weyn ee ku saabsan xusuusta, diiradda, iyo wax soo-saarka? Mararka qaarkood waxaad rabi kartaa in lagaa qaado baaritaankaaga, laakiin waxaad dareentaa inaad aad u mashquulsan tahay inaad gubto saliidda habeenbarka. Waxyaabaha wanaagsani waxa weeye, hadda waxaad si fudud u wanaajin kartaa kartidaada fahamkaaga wakhti gaaban. Iyadoo ay soo ifbaxday tiknoolijiyada, waxaad ogaan kartaa wax badan oo ku saabsan alaabooyinka kuugu horeeya.
Haddii aad dareentid inaad rabto inaad hagaajiso habka maskaxdaadu u shaqeyso, waa inaad isku daydaa isticmaalka nootropics. Nootropic waxay ka timaaddaa ereyga "NOUS" iyo "TROPOS" oo micnaheedu yahay maskaxeed, isbeddelay ama isbedelay. Waxay si fiican u yaqaanaan maandooriyeyaasha caqli-gal ah oo hagaajiya shaqooyinka garashada. Mudo sanado ah, nootropics waxaa la ogaaday inay kordhinayso fiiq iyo saameyn ku yeelashada kartida maskaxda.
Nootropics ayaa soo gashey, gaar ahaan markaad ku dhejisid dheelitirka oo aad u baahan tahay wax aad ku adkeyneyso. Ganacsatada, ardayda, iyo dagaalyahanada xitaa dagaalyahanadu waxay mar walba isticmaalaan aotropics si ay u helaan cidhifyadooda. Wax kale oo aan ahayn, nootropics ayaa lagu soo warramey inuu faa'iido u leeyahay bukaanada ay hayso xanuunada maskaxda sida Huntington's, Parkinson, ADHD, iyo cudurka Alzheimer.
Mid ka mid ah nootropics ee bixiya natiijooyin fiican waa Sunifiram, kaas oo sidoo kale loo yaqaan DM-235. Qaab-dhismeedkuna wuxuu la mid yahay kuwa lagu magacaabo "staretam nootropics", laakiin kun jeer ayuu ka xoog badan yahay piracetam. Sunifiram noloshiisu waa hal ilaa laba saacadood.
Nootropic this waxaa markii hore la soo saaray sanadka 2000 by saynisyahannada ka Jaamacada Firenze ee Italy. Dhammaan baaritaannada lama baadhi karo, laakiin daraasaadka xayawaan ee hordhaca ah ee lagu sameeyey waxay muujinaysaa in ay tahay aotropic si aad u waxtar leh oo laga yaabo inuu kaalin weyn ka ciyaaro maaraynta xanuunka neerfaha.
Sidee ayuu Sunifiram u shaqeeyaa?
Inkastoo Sunifiram waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay nooc ka mida burcad-badeedda, qaab-dhismeedkuna wuu ka duwan yahay marka la barbardhigo jilayaasha. Waxaa lagu qoondeeyey isla heer kiimiko ah sida alkooroyinka alkolka.
Inkasta oo farsamaynta ficilka aan si buuxda loo fahmin, waxaa la ogyahay in ay ka shaqeyneyso dhiirigelinta dhaqdhaqaaqa xayawaanka glutamat. Waxay kaloo kordhisaa wax soo saarka iyo sii deynta asetylcholine, taas oo ah nuurotransmitter barashada.
Sunifiram farsamooyinka asaasiga ah ee ficilka waxaa la aaminsan yahay in uu yahay ampakin. Taasi waxay ka dhigan tahay marka ay ka gudubto barashada dhiigga-maskaxda, ka dibna waxay ku xidhan tahay qaboojiyeyaasha AMPA-da ee glutamate ee laga helo maskaxda. Sidaa darteed, waxaa jira dhiirigelinta soo saarista glutamate, taas oo ah neurotransmitter muhiim ah oo doorkiisa uu yahay naqshadaha neerfaha.
Glutamate waa neurotransmitter xanaaq oo ra'yigiisu yahay inuu dhiirrigeliyo baaxadda sumcadda. Taas macnaheedu waa in ay kor u qaaddo awoodda dareemayaasha dareemayaasha si ay uga jawaabaan korodhka ama hoos u dhaca firfircoonida.
Jidhku wuxuu u baahan yahay heerar ku filan oo ah glutamate sidaa darteed waxaa jiri kara xoog xoog leh ama inuu sii wanaajiyo sii kordhinta awoodda signalka ee u dhexeeya neurons.
Sidoo kale, heerarka glutamate ayaa muhiim u ah hippocampus, doorka maskaxdu waa inuu u oggolaado safar gaaban. Waxay sidoo kale bixisaa sameynta iyo kaydinta xasuusta. Waxaa la rumeysan yahay in Sunifiram uu awood u leeyahay inuu kobciyo howlaha garashada ee maqalka taasoo ah natiijada ka dhalata kor u qaadida awoodda calaamadaha ciladaha ee hippocampus.
Marka laga reebo kordhinta xusuusta xusuusta iyo xusuusinta, ampakines waxay bixisaa kicinta khafiifka ah ee gacan ka geysta kor u qaadida feejignaanta iyo tamarta. Nasiib wanaag, ma keento xasillooni, iyo saameyno kale oo keena isticmaalka kiciyeyaasha sida amphetamines, methylphenidate (Ritalin), iyo kafeyn.
Intaa waxaa dheer, Sunifiram wuxuu u dhaqaa sida cholinergic iyadoo kordhinaysa wax soo saarka iyo sii deynta asetylcholine. Acetylcholin wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhinacyada garashada, inta lagu jiro xawaarida barashada iyo kartida, xasuusta, iyo awoodda lagu xallinayo dhibaatooyinka gaarka ah iyada oo aan ku xirnayn dabeecadaha bartay.
Inkasta oo aan weli la ogeyn sida Sunifiram ay u maamushay soosaarista acetylcholine, baadhitaanka xayawaanka talyaaniga lagu sameeyay ayaa muujisay in DM235 ay leedahay saameyn isku mid ah oo loo yaqaan 'cholinergic' sida piracetam.
Sunifiram iyo habraaca Adderall ee ficilka ayaa aad uga duwan tan Adderall wuxuu ka shaqeeyaa kicinta sii daaya norepinephrine iyo dopamine, taas oo kor u qaadaysa diiradda qofka oo sidoo kale horseed u ah dhiirrigelinta jirka iyo maskaxda.
Sunifiram, oo dhinaca kale, waxay ka shaqeysaa qaabeeyaha glutamate ka dibna kor u qaadida xasuusta xusuusta.
Shan faa'iido oo ka mid ah faa'iidooyinka Sunifiram
Xawaareynta jinsiga oo kordhay
Qof kastaa wuxuu u qalmaa inuu helo nolol jinsi ku qanacsan. Inkasta oo jinsiga lagu farxo uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in qofku ku raaxeysto noloshiisa, waxaa laga yaabaa inaanay noqon kiis kasta.
Dadka qaarkiis waxay noqon karaan kuwo wakhti xaadirka ah inta ay kuwa kale u suurtageli karaan inay isbeddelaan wakhti marba. A jinsiga hooseeya waxay kaa dhigi kartaa inaad maskaxda ku xanuunto oo saameyn ku yeelato xiriirkaaga. Nasiib wanaag, iyadoon loo eegin sida hoos u dhigi karto jinsigaada, waxaa jira caawinaad.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee aad naftaada u dhigi laheyd inaad rabto wakhti wakhti fiican leh lammaanahaagu waa inuu qaato Sunifiram. Sababtoo ah waxay ku sameeyneysaa khiyaamada aad ku dareensiineyso inaadan ka horjoogsan karin lammaanahaaga. Daraasad lagu sameeyay ragga iyo dumarka labadaba waxay muujiyeen in mid ka mid ah faa'iidooyinka Sunifiram uu yahay mid saameyn ku yeelata saameynta afraadiga ah marka la qaato.
Inkasta oo aan weli la cayimin sida ay u sababayso kororka libido, aragtiyooyinka qaarkood waxay soo jeediyaan in uu keeno kororka dhiigga ee guska iyo hoosta haweenka.
Sidoo kale, Sunifiram budada waxay hagaajin kartaa tayada nolosha qofka jinsiga ah adoo ka dhigaya hal dareen dheeraad ah oo taabashada, kor u qaadida istaandarka iyo kicinta sii dopamine iyo serotonin badan (kiimikada dareemaha leh) maskaxda.
Kor u qaadida aragtida iyo aragtida
Maanta, indhahayaga waxay u badan tahay inay ku dhacaan dhibaatooyin aragti ah oo daal leh. Ku dhajinta tirooyin yar iyo sawirro leh shaashado yaryar, taleefan, iyo telefishin ayaa iyaguna gacan ka geysan kara. Waxaa sii xumaanaya qaar ka mid ah daaweynta ma noqon karto mid aad u haboon, gaar ahaan marka aad hadda ku qasban tahay inaad xirtid muuqaalada.
Aragtida wanaagsan waa lagama maarmaan maxaa yeelay waxay u socotaa hab aad u sareeya oo lagu hagaajinayo waxqabadka qofka. Haddii aragtidaadu ay ku jirto qaabka ugu sarreeya, waxa aad u badan tahay inaad isbeddel ku aragto oo aad uga jawaabto iyaga si degdeg ah. Miyaad u aragtay hab aad kor ugu qaadi kartid aragtidaada adiga oon xirtid muraayado laga yaabo inay saameyn ku yeelato waxyeellada indhaha?
Sunifiram ayaa lagu soo waramey in ay dadka isticmaala u aragto aragti qurux badan oo iftiin iyo iftiin madow ka dhigtay mid kale. Waxa kale oo ay ka dhigtaa midabada muuqaalka jilicsan.
Kuwa kale, budada Sunifiram (314728-85-3) ayaa lagu soo waramayaa in ay muusikada maskaxiyan ka shaqeyneyso oo ay ku siiso hal qiiro dareen ah.
Waa xoojiye iyo dhiirigelin tamar
Miyaad isku aragtay niyad jab, midab, buluug, ama dabacsan? Ma dareentay sida tamar hooseeya Heerarka hoos ayay kugu jiidayaan xitaa xitaa koobka koobabka ama cabitaanka tamarta oo u muuqda in uu ku siinayo wiishka? Haddii aad sidan ku socoto, markaa waxaad isku dayi kartaa saameynta Sunifiram si aad u ilaaliso jaahwareerka.
Ka qaybqaatayaasha isticmaala Sunifiram waxay sheegeen in ay ku kordhiyeen tamartooda waxayna siiyeen aragti wanaagsan. Si ay u noqoto tamar, maskaxdu waxay isticmaashaa sonkorta dhiiga badanaa waxaa keena unugyada dhiigga cas. Mid ka mid ah daroogooyinka ka horjoogsada socodka gulukooska ee xuubka unugyada waa Pentobarbital. Qiyaasta Sunifiram oo hooseysa ayaa saameyn la yeelatay.
Qaadashada qiyaasta sare, waxay ka hortagtay gulukoosta inay ka baxdo unugyada dhiigga cas. Sidaas daraadeed, waa mid faa'iido leh oo yareynaya sababtoo ah waxay kor u qaadeysaa kor u qaadista gulukoosta.
Waxay hagaajinaysaa diiradda, dhiirigelinta iyo cadowga maskaxda
Waxaan ku noolnahay adduun ay ku jiraan waxyaabo badan. Mararka qaarkood waxay nagu miisaamaan oo naga nadiifiyaan. Isku-xirka ah in maalin kasta la helo maalin kasta, isla waqti isku mid ah isla markaana sameeynaya wax isku mid ah ayaa naga tagi kara. Inkasta oo dhiirigelinta xoogga leh iyo diiradda ay muhiim u tahay dhammaan hawlihii uu qofku qaadi lahaa, in la gaaro iyaga oo aan fududeyn.
Talooyin badan oo ku saabsan sida aad u horumarin karto diiraddaada iyo fiiro gaar ah ayaa la siiyaa webka. Iyadoo laga yaabo inaadan hubin midkee ka mid ah iyaga oo bixiya, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka ogaato saameynta Sunifiram ee isku mid ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka Sunifiram waa in uu si weyn u wanaajiyo xejinta, diiradda, iyo maskaxda maskaxda. Waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa hagaajinta dhiirigelinta muhiim u ah maareynta guuleysiga iyo fulinta hawlaha maskaxda.
Taasi waxay noqon kartaa sababtoo ah Sunifiram waxay kor u qaadaysaa soo saarida neurotransmitter acetylcholine, doorka ay tahay in kor loo qaado awoodda garashada.
Wuxuu horumariyaa barashada iyo xasuusta
Inkasta oo dad badani aaminsan yihiin in aanad baran karin eyda gaboobay ee cusub, tani ma noqon karto kiiska marka uu maskaxdaada ku jiro. Waxba maaha da'daada, maskaxdaada waxay la qabsan kartaa oo isbedeli kartaa marka ay timaado xasuusta iyo awoodda barashada. Iyada oo ku haboonaanta ku habboon, waxaad kobcin kartaa awoodda aad ku baran karto waxyaabaha cusub iyo sidoo kale hagaajinta xasuustaada.
Daraasaadka daraasaadka xoolaha ayaa muujiyey in Sunifiram ay hagaajineyso xawaaraha barashada ee mid ka mid ah xifdinta macluumaadka. Marka laga reebo kobcinta waxqabadka barashada hawlaha waxbarashada, waxay si wax ku ool ah u bedeshay amniga cudur-abuurka ah. Daraasad lagu sameeyay qof weyn oo caafimaad qaba ayaa muujisay in xataa xitaa qiyaaso yar yar, ay wali tahay mid waxtar leh xoojinta xasuusta iyo barashada.
Mid ka mid ah isticmaalaha Sunifiram wuxuu kordhiyey IQ korodhka shan iyo toban dhibcood ka dib markii la isticmaalo Sunifiram qiyaasta 25mg afar jeer toddobaadkiiba afar bilood.
Waxay yarayn kartaa dareenka xanuunka
Saameyntii murugada ah ee Sunifiram u keentay inay ka caawiso sidii ay u dhaqmi lahayd a xanuun baabiiye iyo quruxda ay la socoto waa in aysan imaanin niyad-jabka iyo walwalka walaaca ee saameynaya xanuunka kale ee xanuunka keena.
Daraasad lagu sameeyay jiirarka ayaa muujisay in dheellitirka Sunifiram dib u dhigtay dareen-celinta kuleylka, taas oo muujinaysa in nootropic this leeyahay xanuunka naaqusinta guryaha. Saameyntan waxaa loo arkay in ay ugu sarreysey qiyaasta Sunifiram ee (0.01 mg / kg) waxay noqon doontaa mid sare, ama qiyaas hoose oo aan waxtar lahayn.
Sida loo isticmaalo Sunifiram
Sunifiram waa mid ka mid ah buotopicska ugu xoogan suuqa oo maanta ah, sidaas darteed, waa in la qaadaa taxadar badan. Maadaama aan si fiican loo baran, way adag tahay in la yimaado qiyaasta saxda ah. Si kastaba ha ahaatee, waa in la ilaaliyaa qiyaas yar, gaar ahaan haddii aad u isticmaalayso markii ugu horeysay.
Badanaa waxay ku timaadaa foomka budada ah, iyo qiyaasta Sunifiram ee lagu talinayo inta badan waa 3mg in 4mg la qaato saddex jeer maalintii.
Caadi ahaan, waxaa jira laba siyaabood oo kala duwan oo aad u qaadan karto budada Sunifiram; waxaad dooran kartaa inaad ku qasto biyo ama aad u sii dheeraato. Haddii aad ku dhejisid carrabkaaga hoostiisa, waxaad dareemi doontaa ilmo yar ama si xun u dareereysi ah sida kuwa aad dareentid markaad saliidaada ku dhejiso.
Qiyaasaha sublimada ah ayaa loo xaqiijiyay in ay si dhakhso ah u shaqeeyaan. Waxaad ogtahay in taakuladani ay saameyn ku yeelatay markii aad bilowdo inaad dareento saameyn dhiira galin ah sida Adderall.
Markaad noqoto qof Sunifiram khibrad leh, waxaad kordhin kartaa qiyaasta 5mg ama 8mg si tartiib tartiib ah. Taasi waa celceliska qiyaasta isticmaalaha khibradda leh waa inuu qaataa. Ka hor inta aanad kordhin qiyaastaada, hubi in aad qaadatay buotopic muddo ka badan hal usbuuc qiyaasta hoose.
Waa inaadan marnaba dhaafin 10mg maalin kasta maxaa yeelay saameynta dheer ee Sunifiram weli wali waa la baranayaa. Sidoo kale qaadashada mudo dheer ayaa laga yaabaa in la dhiso dulqaad; Sidaa daraadeed, waxa ugu fiican ee la sameeyo waa in la ordo Sunifiram wareegyada kala go'a.
Sunifiram Stack waa isku-dhafka Sunifiram oo ay la socdaan hal ama kabadan waxyaabo badan oo loo baahdo si loo wada qaato ama si isku xigta si loo gaaro faa'idooyin garasho dheeraad ah. Qaadashada Sunifiram kaligeed waxay bixisaa faa'iidooyin gaar ah, laakin waxay ku dhejinaysaa nootropic kale macnaheedu waa in faa'idooyinka la kordhiyo. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ka taxaddartaa qiyaasta Sunifiram ee aad go'aansato inaad la jaan qaaddo nootropics kale ilaa aad ka ogaato dareen-celintaada iyaga.
Halkan waxa ku yaala noocyo kala duwan oo aan si fiican u daboolin Sunifiram si loo xalliyo dhibaatooyinka niyadda xun.
L-theanine - Waxay ka shaqeysaa kor u qaadida wax soo saarka GABA, serotonin, iyo dopamine. Waxay sidoo kale joojisaa qaadashada glutamine.
Sulbutiamine- Waxay adkeyneysaa glutamatergic, dopaminergic iyo cholinergic.
Ha iloowin inaad ku darto ilo wanaagsan oo ku shaqeynaya awood xoog leh oo kaa hor istaagi doona xanuunka madaxa iyo saameynaha kale.
Xerada Sunifiram waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan. Saameynta garaadka ee korodhsan, Sunifiram waxaa badanaa lagu soo rogaa mid ama ka badan buotropics oo ka socda qoyska cunsurta ah sida Noopept, Oxiracetam, iyo Piracetam. Tan iyo markii cunsuraysiyada loo yaqaano in la yareeyo heerarka kaluunka ee maskaxda, ilo wanaagsan oo la mid ah Alpha GPC, centrophenoxine ama CDP ayaa lagu talinayaa.
Maxay yihiin saameynta ay leedahay Sunifiram
Qof kasta oo raadinaya siyaabo ay u wanaajin karaan waxqabadkooda iyo samaqabka guud ahaan, dad badan ayaa ku dhacay dhacdooyin waxyeelo u geystey caafimaadkooda. Qaarkood waxay sababi karaan dhibaatooyin caafimaad, halka kuwo kale ay si buuxda u jimicsi karaan jirka. Nololotika ugu fiican ee ku siin kara inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka adigoon kaa tagin gargaar la'aan waa Sunifiram.
Ilaa hadda, wax saameyn ah oo daran oo Sunifiram ah ayaa la soo sheegay, laakiin waxaa fiican in maskaxda lagu hayo in tijaabooyinka aadanaha iyo baaritaanka weli aan weli la sameyn. Cilmi baaris lagu sameeyo xayawaanka ayaa muujinaya in buotopickani yahay labadaba nabdoon oo si fiican u dulqaadan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in xitaa qiyaas ka sarreeya marka loo eego mid ka mid ah kuwa la soo qoray, ma aha mid halis u ah sunta.
Dhibaatooyinka Sunifiram oo dhan ee la soo sheegay ayaa ah kuwo yar yar isla markaasna tagaya isla markaaba. Waxay ka mid yihiin kordhinta heerkulka jidhka midkood, xajmiga sii kordhaya, iyo dhididka. Waxay sidoo kale keeni kartaa madax xanuun, waxay kordhisaa dareenka maqalka iyo muuqaalka, muuqaalka sanka, iyo hurdo la'aan.
Saameyntaan Sunifiram ayaa la soo sheegay inay kordhinayaan marka uu qaato qiyaasta Sunifiram aad u sarreeya ama wuxuu isku daraa waxyaabo kale oo dheeri ah. Haddii aad qaadato qiyaasta lagugula taliyay, waxaad u badantahay inaadan qabin mid ka mid ah saameynaha soo socda. Mar kasta oo aad dareentid in xanuunka madaxu ku dhaco, waa inaad u tagto Alpha GPC.
Yaa isticmaali kara Sunifiram
Sunifiram waa mid u fiican;
Ardayda u baahan inay bartaan oo ku hayaan macluumaad badan.
Dadka marwalba baranaya barnaamijyo cusub, ie, barnaamijyada kombiyuutarada iyo kuwa doonaya inay had iyo jeer ku jiraan ogaanshaha isbeddellada soo baxaya sida naqshadeeyayaasha webka
Engineers iyo farsamoyaqaan shaqadoodu u baahan tahay mid ka mid ah inay noqoto mid hal abuur leh iyo xallil mushkilad degdeg ah
Dadka si joogto ah u baahan inay wax badan akhriyaan si ay u sii joogaan karti iyo xirfad
Sida ku cad maqaalkan, Sunifiram waa nooca nootropic oo buuxin doona baahida jidhkaaga oo dhan. Marka ay timaaddo nabadgelyada, waxay ku leedahay culeys; Dhamaantiis, ma la imaan waxyeellooyin taas oo kugu dhejin doonta dhakhtar ka dib markaad qaadato. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad dooratid buotropic saxda ah inaad isku daro oo aad isticmaasho qadarka saxda ah waqtiga saxda ah. Ku amrigaaga adigu maanta oo aad gaarto hadafyada jireed iyo garashada.
Fosfotransferases-Horumarinta Cilmi-baarista iyo Codsiga: daabacaadda 2013, bogga 16-30
Ampakine: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, Buugaagta Guud, bogga 1-36
Maskaxda Raining: Habka casriga ah ee Horumarka Aqoonta, By Anthony Simola.
2019-10-30 at 12: 57 pm
haye !, runti waan jeclahay qoraalkaaga aad u badan! Saami ahaan waxaan sii wadnaa waraaq dheeri ah oo ku saabsan boostadaada AOL? Waxaan u baahanahay khabiir ku xeel dheer qolka si aan uga sheekeeyo dhibaatada. Malaha taasi waa adiga! Horey ayaan u fiirinayaa
Peptide Epithalon Acetate: Miyuu yahay daroogada kale ee anti-aging?
Maxay tahay inaan ogaado kahor iibsashada Peptide Alarelin?
Shangke Kiimikadu waa shirkad tayo sare leh oo ku takhasusay dhexdhexaadinta firfircoon ee daawada (APIs). Si loo xakameeyo tayada inta lagu jiro wax soo saarka, tiro badan oo xirfadlayaal khibrad leh, qalab wax soosaaraya iyo shaybaarrada ayaa ugu muhiimsan.
© Shangke Kimiko 2019 | La sameeyey by www.phcoker.com